७६ मा किनेर १३० मा बेच्दा पनि नेपाल आयल निगम नि’रन्तर घा’टामा कसरी जान्छ ? – Paluwa Khabar
कार्तिक ८, २०७८ सोमबार 86
काठमाडौँ : पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि र डलरले निगमलाई साढे तीन महिनामै आठ अर्ब ८९ करोड घाटा भएको छ ।
अहिले भइरहेको घाटा निगमले सञ्चित नाफाबाट पूर्ति गरिरहेको छ । तर यही रफ्तारमा नोक्सानी बढे २/३ महिनापछि ऋण लिएर आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । वृद्धि रफ्तारमा बढिरहे सञ्चित मुनाफाले दुई महिना पनि धान्दैन,’ साहले भने,
‘त्यसपछि ऋण लिएर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक आईओसीले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । खरिद मूल्यमा अत्यधिक कर जोडिँदा सर्वसाधारणलाई मार परिरहेको छ । निगम पनि नोक्सानमा गइरहेको छ ।
आईओसीले पठाएको मूल्यअनुसार जुलाई १६ मा १ अर्ब १२ करोड ६४ लाख, अगस्ट १ मा १ अर्ब २१ करोड ३९ लाख, अगस्ट १६ मा ९६ करोड ९ लाख रुपैयाँ घाटा भएको निगमको तथ्यांक छ ।
सेप्टेम्बर १ मा ८१ करोड ३० लाख, सेप्टेम्बर १६ मा १ अर्ब ५ करोड २ लाख, अक्टोबर १ मा १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख र अक्टोबर १६ मा २ अर्ब २२ करोड ६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले जनाएको छ ।
‘आईओसीले अक्टोबर १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार १५ दिनमै २ अर्ब २२ करोड नोक्सान देखिएको छ । संस्थानले यसरी लामो समयसम्म थेग्न सक्दैन,’ निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भने, ‘अब निगमको सञ्चित पुँजी धेरै छैन ।
घाटा यस्तै रहे संस्थान सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’ यसअघि निगम २०५९/६० देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । २०६५/६६ सालमा भने निगमको नाफामा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो
Prevपाँच दिनदेखि सुत्केरी ब्य’था लागेकी महिलाको उ’द्धार
Next४० हजारको लोभमा ह’त्या गरी आँगनमै पुर्ने प’क्राउ ?यसरी रहेछ हेर्नुहोस।
आखिर के भयो प्रचण्ड पत्निलाई यस्तो? प्रचण्डका परिवारका सबै सदस्यहरु बने एकाएक निराश
बिहिबार देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काराेना ब्रिफिङ नगर्ने
जन्ती बोकेको जिप दु,र्घटना हुँदा पाँच जनाको घ,टनास्थलमै मृ,त्यु